12 Talaabo oo lagu dhisayo Dalabka Wakaaladdaada Cusub » Martech Zone
Thursday, April 2, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo
Toddobaadkii hore wuxuu ahaa usbuuc la yaab leh markii Dunida Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada halka aan kaga hadlay mowduuca ah Influencer Suuq. In kasta oo dhagaystayaashu ay u badnaayeen shirkado raadinaya talo ku saabsan sida loo hirgaliyo istiraatiijiyad guuleysata, waxaan ku soo laabtay gurigeyga waxaana su'aal wanaagsan ka weydiiyay mid ka mid ah ka soo qeybgalayaashii xiisaha aan u qabay sida aan u dhisay saameyn ku filan iyo dalab aan ku bilaabo hay'ad ii gaar ah.
Waxaan rabaa in aan ogaado sida aan ugu dhaqaaqi karo helitaanka macaamiisha (lacagtaas) si aan u siiyo la-talin iyo tababar… anigoo qiimeynaya waxa ay hadda haystaan, ka dibna soo bandhigaan istaraatiijiyado, xalal, talooyin iyo qaababka ugu fiican. Waan ogahay in baloog garaynta, buugaagta, buugaagta elektaroonigga ah, websaydhyada, iyo fiidiyowyadu ay yihiin meelo wanaagsan oo laga bilaabo. Halkee ayaan ka bilaabay kali ahaanshada sidee ayaanse ku kasbadaa ganacsigeyga si ku filan oo aan u qaban karo waqti buuxa?
Marka, maxaan sameeyay si aan u bilaabo wakaaladayda oo sideen u samayn lahaa si ka duwan?
Shabakadaada - Ganacsigaagu kuma xirna dhibcahaaga Klout, tirada dadka raacsan ee aad leedahay, ama qiimeyntaada raadinta. Ugu dambeyntiina, meheraddaadu waxay ku guuleysan doontaa iyada oo ku saleysan maalgashiga aad ku sameysid ballaarinta iyo abuurista xiriirro shaqsiyeed shabakaddaada jirka. Taasi macnaheedu maahan in bulshadu aysan macno lahayn, waxay kaliya ka dhigan tahay in bulshada aysan macno yeelan doonin ilaa aad si shaqsiyan ah ugu xirmi karto kuwa dhinaca kale ee kiiboodhka.
Blog niche - qof kastaa wuxuu ka hadlayaa warbaahinta internetka waqtigaas oo aan bilaabay boggeyga, laakiin qofna si gaar ah ugama hadlin xalalka la heli karo ee lagu caawin karo suuqleyda. Runtii taasi waxay ahayd jacaylkaygii ... anigoo ka shaqeeyey softiweer ahaan sidii adeeg warshadeed oo aan u kuur galayo Internetka waxa xigi doona, waxaan noqday nin ka mid ah aaladda shabakadda. Ma jirin baloog kale oo halkaas ka baxay sidaas ayaan ku bilaabay aniga. Haddii aan markale sameyn karo, xitaa waan sii adkeyn lahaa mowduucayga, juqraafiga, ama diiradda warshadaha.
Bulshada - Waxaan booqday, faallo ka bixiyay, dalacsiiyay, la wadaagay oo aan jawaab-celin ka siiyay hoggaamiyeyaasha kale ee bulshada. Mararka qaar doodaha oo dhan waan la wadaagi jiray sidoo kale, laakiin diiradeydu marwalba waxay ahayd inaan qiime ku daro joogitaankooda anigoo magacayga halkaas ka ogaanaya. Qaab fiican oo loo sameeyo maalmahan ayaa ah bilaabida boodhadhka iyo wareysiga hogaamiyaasha warshadaha aad jeclaan laheyd inaad la shaqeyso ama aad u shaqeyso.
Isagoo ka hadlayay - Warbaahinta dhijitaalka ah kuma filna (qiiq!) Marka waa inaad tagtaa adigoo riixaya hilibka. Waxaan isxilqaamay si aan meelkasta uga hadlo deegaan ahaan iyo qaran ahaanba. Waxaan sii waday wanaajinta xirfadaheyga hadalka, xirfadaha qorista (waad ku doodi kartaa taas) iyo xirfadaheyga bandhigga. Markaan kahadlayo dhacdo, waxaan helaa raadad badan oo hagitaan ah oo aan ahayn kaliya qorista wax qorista. Si kastaba ha noqotee, waxaan u baahanahay inaan sii wado balooggeyga si aan u helo fursadda hadalka sidaa darteed maahan mid ama mid kale. Markasta oo aan hadlo, waxyar ayaan ka fiicnaaday waqtigii iigu dambeeyay. Kala hadal meel walba iyo qof walba!
Bartilmaameedsiga - Waxaa jira dhowr iyo toban shirkadood oo aan doonayo inaan la shaqeeyo waana ogahay cidda ay yihiin, cidda aan u baahanahay inaan la kulmo, waxaanan dejiyaa qorshayaal ku saabsan sida aan ula kulmi doono. Mararka qaarkood waxay u maraysaa saaxiibkay oo leh xiriir ku saabsan LinkedIn, mararka qaarkood waxaan si toos ah uga codsanayaa iyaga inay kafeega ka baxaan, mararka qaarna waxaan weydiistaa inaan ku wareysto wareysigeenna ama aan ku martiqaado inay u qoraan dhagaystayaasheena. Uma yeeri maayo iibintaas (laga yaabee in dabagal lagu sameeyo), laakiin waxay la shaqeyneysaa iyaga si loo arko haddii aan ku habboonaan karno ururkooda iyo dhinaca kale.
Caawinta - Meel kasta oo aan kari karo, waxaan ku caawin jiray dadka aniga oo aanan filayn in mushahar la i siin doono. Waan dallacsiiyay iyaga, koobay nuxurka oo aan la wadaagay, siiyay jawaab celin, wax walbana bilaash ayaan ku siiyay. Waa inaad xusuusnaataa intaan taabanayo 100,000 oo qof oo soo booqdayaal gaar ah, dhagaystayaasha, daawadayaasha, kuwa wax qariyo, kuwa raacsan, taageerayaasha, iwm. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad dhisto sumcad, leedahay daraasado kiis oo aad natiijooyinka u kaxeyso qaar si aad shaqo u hesho. Waxaan dhisnay sumcad ku saabsan suuqgeynta gudaha, istiraatiijiyado la qiyaasi karo, SEO adag oo loogu talagalay daabacayaasha waaweyn, iyo maamulka nuxurka… Laakiin qaarkeed waxay kubilaabeen kaliya iyagoo ka caawinaya dadka inay wax un doqon ah ku hagaajiyaan degelkooda.
Waydiinta - U sheegida qof walba waxa aad ku fiicantahay runti si fiican ugama shaqeyso marka aad wax iibineyso. Laakiin in qof kasta la weydiiyo halka ay caawimaad uga baahan yihiin ayaa ah hab aad uga wanaagsan. Suugaan ahaan, daqiiqado yar kahor waxaan laxiriiray shirkad aan caawinay oo taraafikadeedu ay 10 jeer ka badantahay wixii ay ahayd 4 sano kahor oo aan waydiistay inaan la kulmo si aan u aragno meesha kale ee aan ka caawin karno. Waydiinta shaqeeya. Maqalka waxa rajada ama macmiilku la dhibtoonayo ka dibna uu arko haddii aad ka shaqeyn kartid xalalka qaarkood iyaga ayaa ah habka ugu fiican ee lagula galo shirkad. Ku bilaw wax yar, cadee naftaada, ka dibna waxaad si qoto dheer oo qoto dheer u hawl gashaa.
Kordhinta naftaada - Waa icky… laakiin waa lagama maarmaan. Haddii laguu hanbalyeeyo, la wadaago, la raaco, la sheego, ama wax kale oo aadan aqoon - taasi waa xaqiijin weyn oo khibraddaada ah. Waxaan gebi ahaanba ka qoomameynin inaan u ololeeyo waxa dadka kale iga sheegaan. Anigu si firfircoon uga codsan maayo qof walba inuu sameeyo, laakiin haddii fursaddu timaado oo qof i siiyo ammaan, waxaan ka codsan karaa inay internetka geliyaan.
Fiiri Xirfadle - Cinwaan sax ah, cinwaanka iimaylka ee bartaada (ma aha @gmail), cinwaanka xafiiska, sawir xirfadeed, astaan ​​casri ah, degel qurux badan, kaararka ganacsiga oo kala duwan… kuwan oo dhami ma aha oo keliya kharashaadka ganacsiga. Dhammaantood waa kharashyada suuqgeynta iyo calaamadaha aaminnimada. Haddii aan arko cinwaanka gmail, ma hubo inaad dhab ka tahay. Haddii aanan arag cinwaan iyo lambar taleefan, wax fikrad ah kama haysto inaad meherad noqon doontid usbuuca soo socda. Helitaanka shaqaaleysiintu waxay ku saabsan tahay aaminaad iyo kharash kasta oo dibedda laga daawado waa qayb ka mid ah kalsoonida.
Qor Buug - Xitaa haddii iibka kaliya ee aad hesho aad tahay adiga iyo Hooyadaa, qorista buug waxay muujineysaa in wax kasta oo warshad ah oo aad ku jirto, aad si qoto dheer u falanqaysay oo aad u dhistay istiraatiijiyad kuu gaar ah oo aad kaga shaqeyn karto. Intaan qoraaga ahayn, kama aanan helin waqtiga maalinta shirarka qaarkood ama macaamiisha. Ka dib markii aan ahaa qoraa, dadku waxay ii fidinayeen lacag si aan ula hadlo. Waxay umuuqataa doqon, laakiin waa cunsur kale oo aad dhab ka tahay warshadahaaga.
Bilaabida Ganacsigaaga - Marna ma jiro lacag kugu filan iyo waqti ka wanaagsan oo aad ku bilaabi karto ganacsi hadda ka fiican. Qof kasta oo ka fikiraa wuxuu u maleynayaa inuu u baahan yahay tan, wuxuu u baahan yahay intaas, wuxuu sugayaa hal shey oo dheeri ah, iwm. Ilaa aad kaligaa iska baxdo oo aad dareento dareenkaas xun ee ku jira godka calooshaada ee kaa dhigaya inaad gaajooto inaad ugaarsato - waxaad joogi doontaa isla meesha aad joogto. Wiilkaygu wuxuu bilaabayay jaamacad aniguna waan dhintay markii aan bilaabay DK New Media. Toddobaadyo ayaan ku seexanayay miiskeyga anigoo sameynaya shaqooyin aan caadi aheyn si aan nolol maalmeedkeyga u daboolo… waxaana bartay sida loogu diyaar garoobo si ka wanaagsan, suuq u sii wanaajiyo, si ka wanaagsan wax loo iibiyo, si fiican loo xiro, iyo ugu dambeyn in ganacsigeyga la dhiso. Xanuunku waa dhiirrigeliye cabsi badan oo isbeddel ah.
Qiimaha - Ha diirada saarin waxa aad dusha ka saareyso ama inta aad sameyso, waxaad diirada saartaa qiimaha aad dadka kale u keento. Waxaan daawadaa dadka qaarkiis inay qiyaasaan oo ku saleysan saacadaha ay shaqeeyaan iyo inay jabaan. Waxaan daawadaa dadka kale oo lacag qaata si ay ugu soo dhacaan bucks waxayna had iyo jeer raadinayaan macaamiil cusub. Maaha wax hagaagsan, laakiin waxaan diiradda saareynaa qiimaha aan u keenno macaamiisheenna ka dibna dejino miisaaniyad labadaba la awoodi karo oo ku habboon iyaga. Mararka qaarkood waxay ka dhigan tahay inaan sameyno isbedello yar oo natiijo badan ka keena dakhliga, waqtiyada kalena waxay la macno tahay inaan dabada ka shaqeyno si aan u saxno khaladaadkeenna iyadoo aan lacag la siinin. Laakiin markay macaamiishu ogaadaan qiimaha aad keensatay, kama fakarayaan inta aad ku kacday.
Midkoodna, dabcan, ma saadaalinayaan guushaada. Waxaan soo marnay sannado aad u wanaagsan waxaana soo maray sannado musiibo ah - laakiin waxaan ku riyaaqay mid kasta oo ka mid ah. Waqti ka dib waxaan soo saarnay dareen ah noocyada macaamiisha aan sida wanaagsan ula shaqeyno iyo kuwa kale ee ay tahay inaan tixraacno. Waxaad sameyn doontaa khaladaad waaweyn - kaliya wax baro oo horay u soco.
Rajadaasi waxay kaa caawineysaa!
DK New Media waa wakaalad warbaahineed oo cusub oo diiradda saareysa suuq geynta suuq geynta oo ay weheliso koox khubaro suuq geyn iyo tikniyoolajiyad ah. Iyaga iyo kooxdooda khubarada omni-channel-ka ah ee ka shaqeeya dhammaan warbaahinta, DK New Media waxay leedahay hadaf ah in la bilaabo lana beddelo macmiilka joogitaankiisa khadka tooska ah ee internetka si loo kobciyo wadaagga suuqa, wadista hoggaanka iyo in la wanaajiyo wadahadalladooda khadka tooska ah. DK waxay kordhisay saamiyada ay ku kala iibsanayso macmiil kasta oo ay la shaqeeyeen waxayna si gaar ah ugu xeel dheer tahay ka shaqeynta shirkadaha tikniyoolajiyadda suuqgeynta maadaama ay dhagaystayaal badan ku leeyihiin daabacaddan. DK New Media wuxuu ku faanaa xaruntiisa dhexe wadnaha Indianapolis.
Tags: ku saabsan dk new mediahay'addaweydiisanayahubkaabeeshaDK New Mediadouglas karrcaawintasida loo sameeyo hay'adnetworkIsgaadhsiintahorumarintais-hormarinhadlayaybilow hay'adqiimaha
Adiga unbaa Suuqgeynaya
Aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad siisay qoritaanka maqaalkan. Tani waa sida saxda ah waxa milkiile ganacsi kasta u baahan yahay inuu maqlo, xitaa haddii bilowgooda ama ay ganacsi ku jireen sannado. Dhamaanteen waxaan leenahay halgano waxaanan dooneynaa talo ku saabsan sida aan ku gaari karno himilooyinkeena. Runtii runtii aad baan uga helay sidaad daacad u ahayd oo aan markhaatigaaga u sheegay. Waxaan la wadaagi doonaa maqaalkan oo akhristayaashaadu ay sameeyaan.
Tim Flint (@miidaas)
Mid baan ku darayaa Noqo saaxiib weyn. Taasi waa waxa aad sameysay. Waad ku mahadsantahay saaxiibtinimadaada iyo hambalyo sanad kale!
Mahad badan, Tim! Hirar kacsan, eh?
hello doug, waad ku mahadsan tahay maqaalkan saxda ah ee saxda ah, waxaan ka bilaabayaa wakaaladayda suuq geynta dijitaalka ee Togo talooyinkaaguna waa baarar dahab ah